adminSep 24, 2020WARARKA0
Frank Lampard ayaa albaabada u furay Antonio Rudiger iyo Callum Hudson-Odoi oo ka tagaya Chelsea ka hor inta uusan xidhmin suuqa kala iibsiga ciyartoydu.
Lampard ayaa suuqa galiyay £ 200million isagoo soo gata ciyaartoy tayo leh xagaagan, doonayana inuu xilli ciyaareedkan la tartamo kooxaha waaweyn kuna guulaystaan koobab wayn.
The Guardian-na waxay sheegaysaa in Rudiger iyo Hudson-Odoi loo ogolaaday inay kooxda ka bixi karaan albaabaduna u furan yihiin.
Rudiger oo 27 jir ah ayaan wali ciyaarin xilli ciyaareedkan. Daafaca dhexe ayaa ka mid ahaa koox ciyaartoy ah oo aan la isticmaalin ciyaartii ay Chelsea 3-1 kaga badisay Brighton iyadoo intaa ka dibna laga saaray safka kulankii guuldaradu ku soo gaadhay 2-0 ee Liverpool.
Hudson-Odoi, oo 19 jir ah, ayaa kursiga keydka ka kacay daqiiqadii 80aad ee kulankii Seagulls laakiin ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ayaa raadin doona balanqaadyo la xidhiidha mustaqbalkiisa isagoo saxiixay qandaraas cusub oo 5 sanno ah bishii Sebtember ee la soo dhaafay.
Sida laga soo xigtay The Telegraph, Bayern Munich ayaa xiddiga reer England ku qaadan karta amaah hal xilli ciyaareed ah kadib markii uu 18 bilood ka hor seegay heshiis joogto ah.
Manchester United ayaa isha ku heysa daafaca Ajax ee Nicolas Tagliafico oo ah bedelka ugu macquulsan ee Alex Telles.
Tababaraha United Ole Gunnar Solskjaer ayaa doonaya daafac bidix oo cusub si uu ula tartamo Luke Shaw.
Ciyaaryahanka reer Brazil Telles, oo 27 jir ah, ayaa si xoogan loola xidhiidhinayay inuu u soo wareegayo Old Trafford, waxaana uu ku jiraa sannadkii ugu dambeeyay qandaraaskiisa kooxda Porto.
Wadahadalada u dhexeeya United iyo kooxda reer Portugal ayaa lagu soo waramayaa inay weli socdaan.
Laakiin The Sun ayaa sheegaysa in Red Devils ay sidoo kale ka fiirsaneyso daafac dambeedka midig ee reer Argentina Tagliafico oo 28 jir ah, kaasoo laga yaabo inuu uga tago Ajax qiimo dhan £23million.
Sida laga soo xigtay Manchester Evening News, Daniel James lama filayo inuu ka tago United xagaagan.
Xiddiga reer Wales ayaa lala xidhiidhinayay inuu u dhaqaaqayo kooxda ku cusub Premier League ee Leeds laakiin ilo wareedyo ku dhow James ayaa sheegaya inuu sii joogayo Old Trafford.
Haddana taasi way is beddeli kartaa haddii Solskjaer uu la soo wareego daafaa garabka midig ee Argentina ka hor 5-ta Oktoobar.
Tom Davies ayaa u muuqda bartilmaameed amaah ay ku rabto kooxda Southampton.
Tababaraha Saints Ralph Hasenhuttl ayaa la sheegay inuu aad u baadi goobayo badalkii u buuxin lahaa kabaha Pierre-Emile Hojbjerg oo kooxda ka tagay.
The Sun ayaa rumeysan in Davies oo 22 jir ah kana ciyaara khadka dhexe uu ku jiro liistiisa markii uu hoos uga dhacay safka hore ee garoonka Goodison Park.
Arinta layaabka leh ayaa ah in tababaraha Toffees Carlo Ancelotti uu xagaagan la soo saxiixday xiddigaha khadka dhexe ee Abdoulaye Doucoure iyo Allan kadib markii uu seegay Hojbjerg oo doortay in uu ku biiro kooxda Tottenham.
Previous PostDawladda UK oo ku dhawaaqday xayiraado cusub oo COVID-19 looga hortagayo Next PostDonald Trump ayaa diiday in si nabad uu xilka ku wareejiyo haddii laga guuleysto doorashada.